Heshiis laga gaaray qaxootiga Soomaaliya - BBC Somali
Heshiis laga gaaray qaxootiga Soomaaliya
Image caption Dadaab waxay ka mid tahay xeryaha qaxootiga ee ugu wayn adduunka iyadoo ay ku nool yihiin ilaa afar boqol oo kun oo qof.
Dawladaha Soomaliya, Kenya iyo hay'ada qaxootiga ee UNHCR waxaa ay ku heshiiyeen in qaxootiga daneynaya inay dib u noqodaan laga caawiyo sidii ay waddankoodu ku gaari lahaayeen.
Balse waxaa heshiiska ku xusan in qaxootiga go'aansado in ay Kenya sii joogan la siiyo kaalmada iyo badbaadada ay u baahanyihiin.
Madaxweyne ku xigeenka Kenya William Ruto, waxaa uu sheegay inuu rajeynayo in heshiiska maanta uu wadada u xaaro in dhamaan qaxootiga ku nool waddankiisa ay dib ugu noqdaan Somaaliya seddaxda sanno ee soo socoto.
Hay'ada qaxootiag ee UNHCR, ayaa dhinaceeda sheegtay in loo baahan yahay in daad gureynta qaxootiga daneynayo in ay noqdaan ay u dhacdo si ixtraam leh.
Wakiilka UNHCR ee Kenya, ayaa hoosta ka xariiqay in looga baahan yahay dawaladda Ssomaliya in ay hubiso in kuwa go'aansaday in ay noqdaan ay u fidiso adeegyada muhiimka ee ay u baahan yihiin.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Fowsiyo Yusuf Xaji Aden, oo heshiiskan u saxiixday dawaladda Somaaliya, ayaa sheegtay in amaan uu ka hanaqaaday waddanka, loona baahan yahay in qaxootiga waddankooda ku noqdaan si ay uga qeyb qaataan dib u dhiska. Waxaa ay sheegtay in illaa iyo billowgii sanadkan ay 8 kun oo qaxooti ku noolaa Kenya ay dib ugu noqdeen Somaaliya.